Phalcon The kasị PHP Framework ugbu a | DDNS Cloud Hosting News!
Home » Cloud Hosting » Phalcon The kasị PHP Framework ugbu a
Phalcon The kasị PHP Framework On The Web ugbu a!
Speed ​​nwere a oké mkpa dị mkpa na okwu nke na-elu search engine rankings, ebe arụmọrụ njikarịcha aghọwo a n'elu mkpa maka IT ụlọ ọrụ.
The hosting industry and webmaster’s march toward faster load times has fuelled the birth of Phalcon – a solution, nke awade a ohuru obibia rụọ website arụmọrụ.
Mụta ihe banyere Phalcon kpuchie, the advantages it can bring to your online projects and how you can make use of it on our web mba n'elu ikpo okwu.
Ụfọdụ Ndenye History Of Phalcon
Mbụ wepụtara na 2012, Phalcon is na-emeghe-isi iyi PHP web ngwa kpuchie licensed under the terms of the BSD License.
Ọ na-e kere Andrés Gutierrez onye wee na a ọhụrụ ọsọ-okowụk PHP web ngwa kpuchie development obibia.
The aha nke kpuchie onwe ya wee dị ka ọ na anya, ebe falcons nwere n'etiti ndị kasị ụmụ anụmanụ na Earth.
N'adịghị ka ọtụtụ PHP frameworks, Phalcon e tụụrụ ime ka a web server ndọtị.
Dere na Zephir na C, ọ dabeere na nlereanya-view-njikwa (MVC) ụkpụrụ.
Ebe ọ bụ na Phalcon mbụ tọhapụ, ya na mmepe na-edebe mma kpuchie site na-agbakwụnye ọhụrụ arụmọrụ-boosting atụmatụ. One dị otú ahụ ihe atụ bụ volt template engine.
Phalcon mbụ PHP 7 support-yana idobe okirikiri LTS ntọhapụ ẹkenam on 29 July 2016. Ọ bụ na-kpuchie si ọhụrụ anụ version ka ọ dị ugbu.
SemVer ga-adaberewo na n'ọdịnihu nakwa.
Phalcon si isi uru n'elu ihe nkịtị PHP frameworks
Phalcon emewo ngwa ngwa nweela ewu ewu n'ihi ịbụ ndị kasị PHP kpuchie na web.
Na n'ụzọ ziri ezi otú, atụle ya na-efe efe mmalite na ọnụ ọgụgụ nke ndozi na ya ije na nnọọ mkpụmkpụ a oge.
Wuru dị ka a web server ndọtị kama dị ka a nguzo-naanị PHP kpuchie, Phalcon-enye ohere maka a revolutionary arụmọrụ njikarịcha.
Lee ndị isi ihe mere Phalcon aghọwo aga-na ngwọta maka ọsọ-okowụk web oru:
Sikwuo egbu gbapụrụ ọsọ
Ekele ya otutu nzuzo echiche, Phalcon-enye ohere maka ihe HTTP arịrịọ-esichara kwa abụọ (tụnyere yiri frameworks e dere isi na PHP), which lowers execution times drastically.
Ị ga mkpa mgbọrọgwụ ohere ka ihe nkesa na-eme ka ojiji nke ya.
Anyị na-na-emejuputa atumatu a Phalcon-enyi na enyi na gburugburu ebe obibi na anyị ikpo okwu ka unu na nke kacha mma arụmọrụ nke gị Phalcon-kwofere website.
You can enable Phalcon for your speed-sensitive projects from the PHP Settings section of your Ogwe njikwa:
Daalụ maka ịgụ ihe
DDNS ígwé ojii mba & ngalaba aha